Salaadda Santa Muerte si ay u xukunto nin [+]?
Salaadda dhimashada Quduuska ah si ay u xukumaan nin Waxaa dad badani u arkaa salaadda inay wax yar ka qabtaan diinta Kaatooligga ama diinta masiixiga maxaa yeelay waa aaminaad ka timaada dadka asal ahaan ka soo jeeda Mexico.
Si kastaba ha noqotee, inkasta oo loo arko inay tahay muuqaal jinni ah, runtu waxay tahay in walikani caawiyay dad badan oo uu leeyahay awood gaar ah kiisaska dareenka ku lug leh.
1 Salaadda Santa Muerte si ay u xukumaan nin Waa kuma Santa Muerte?
2 Salaadda dhimashada Quduuska ah si ay u xukumaan nin
2.1 Waa maxay ducadan?
2.2 Goormaan tukan karaa salaadda Santa Muerte si aan u taliyo?
Salaadda Santa Muerte si ay u xukumaan nin Waa kuma Santa Muerte?
Santa Muerte waxaa loo soo bandhigay qaab caan ah oo caqiido ah oo lagu xushmeeyo magaalooyin badan oo Latin Ameerika ah, badiyaa Mexico halkaasoo lagu xuso inay tahay dhaqan diimeed caam ah.
Ku metelo jaantus qalfoof ah oo loo labisan karo midab kasta laakiin midka matalaya midka ugu badan waa madow.
Taageerayaashiisu badanaa waxay dareemayaan in la diido maadaama ay caabudaan sheeko kaniisadda katoolikku aysan u aqoonsanayn sidaas laakiin in qalbiga iyo iimaanka dad badani ay yihiin Saint oo kale.
Waxay dhahaan maya dhiirrigeliya cabsi laakiin ixtiraam aaminaadna waa mida ugu dambaysa ee ka dhigaysa kuwa sii kordhaya ku biirista mu'miniinta.
Gubashada malabka, damaca gubashada. Waan kuu dareemayaa______________,
Adigana waad i dareemeysaa Fikirkaaga iyo dareenkaaga ...
Waxaan si buuxda ugu talinayaa Maskaxdaada iyo howlaha aad qabato Mawduucyada dhimashada barakeysan.
Waxaan kuu yeerayaa ____________________ Waan kuu baahanahay __________________ Kaalay i raadso __________________ Oo hortayda ku foororsada adigu waad ahaan doontaa. ____________ i tusi jacaylkaaga oo dhan.
_____________ Kaalay cagtayda, U dhammaystir wax kasta oo aan kaa codsado. Marwada Habeenka, Marwada ugu weyn adduunka, iyo tamarteeda dhulka ...
Saamayn iyo xakamee maskaxda, ficilada iyo qalbiga __________________ Marwada guud, waxaad tahay dhimashadayda Barakeysan ii keen _____ hortayda.
Cadaawayaashaydu ha i yimaadeen, Oo qalbigiisuna ha habaabeen jacaylkayga, Oo jidhkiisuna ha iiga baahan yihiin In jacaylkiisu yahay jacayl aan isaga siiyo.
Midkeyga barakaysan, ha siin daqiiqad raalli ah Ama dammaanad qaad _____________ Haddii aadan ila joogin Ha u oggolaan naag kasta inay ku soo dhawaato Haddii ay kuu soo dhowaadaan, In aad si buuxda uga fogeyn doontid noloshaada gardarro buuxda.
Hadduusan ahayn aniga, markaa waxay noqon doontaa cidna, Dhimashada barakaysan, Marwo Qaado, Waxaan kaa baryayaa adiga oo dhan hanuunkayga. Dheecaanka Myrtle wuxuu ku wareegaa gubashadiisa dhiigiisa waxaan kuugu yeerayaa ____________________ ii kaalay. Qalbigaaga, fikirkaaga iyo jirkaaga Waqtigan xaadirka ah waxay yihiin iyo waxay ahaan doonaan kuwa waligood, weligood.
Anigoo ku hadlaya magaca dhimashada Barakaysan. Marwada Koowaad ayaa i _________________ Ku sakhraamaysa jacayl aniga igu saabsan.
Oo waxaan isu dhiibay dhirtayda Si aan ugu hoggaansamo oo i tuso jacaylka oo dhan maxaad ii dareemeysaa. Santísima Muerte, adigu dhaqaaqa tamarta ugu cufan uguna adag caalamka, leexo ________________. Xitaa hadday tahay mid ka mid ah meelaha ugu mugdisan Had iyo jeer hor A _______________ hortayda oo jidkeedu ha ka soo tallaabo dhinacayga.
Santísima Muerte kaa noqon kara kun Adiga milyan noqon kara, ii kaxee _____________ Jaceylna ii qabo waxaan kaa codsanayaa in faraskaaga hortayda la keeno In warankaagu ii tuuro aniga Marwada Adag iska hubso in xitaa haddii uusan la socon kan I uraya , taasi way i xasuusisaa, inaan dareemo inaan joogo ...
Cidkasta oo uu la joogo iyo meesha uu ku sugan yahay Marwada Habeenka, Marwada maalinta, waxaan codsanayaa in ruuxa _________________ uu ila joogo markasta ...
In isagu kaliya uu i jecel yahay, in uu keliya indhaha u leeyahay dhimashadayda barakaysan _____________________
Qalbigayga iyo jidhkayga Jidhkayga, maskaxdayda iyo nafteyda _______________ ii kaalay Habeenkii iyo maalintaba waad ila jiri doontaa Fadlan, waxaan ku weydiinayaa magaca Santísima Muerte Santísima Muerte i sii ciidanka, wadnaha…
Iyo magaca guud ee __________________ Santísima Muerte waxaan kaa codsanayaa inaad ii ahaatid ilaaliye Aniguna waad fulisaa dhammaan nimcooyinka aan kaa weydiisto.
Geerida Barakeysan Ha iloobin Dhimashadii Barakeysan ee ii keentay ______________!
Qeybtan Santa Muerte si ay u xukumaan nin adag way weyntahay laakiin xoog badan tahay.
Maahan duco is-jeclaan ah, waa duco la weydiisanayo awoodda qof inuu arko wixii maskaxdiisa beddelaya.
Maaha ku saabsan in la ceebeeyo ama laga dhigo in dadka kale wax yeelaan, waa in laga caawiyo iyaga inay arkaan xulashooyinka, sida annaga noo ah, ayaa ugu fiican.
Tani iyo salaadda oo dhan Runtii way awood badan yihiin, waad sameyn kartaa markasta oo aad kujirto xaalad adag oo aadan aqoon u laheyn inaad sameyso.
Marka laga hadlayo salaadda qaaska ah, waxa la raadinayaa waa in qofka awooda lagu xukumo iyada oo loo duceeyo taasina waa suurtagal haddii aad iimaan leedahay.
Goormaan tukan karaa salaadda Santa Muerte si aan u taliyo?
Daqiiqada aad rabto.
Dad badan ayaa kugula talinaya inay ugufiican tahay kali ahaanta oo la diyaariyo jawiga si tamar darrada xun aysan saameyn ugu yeelan jihada salaadda laakiin tani maahan qasab.
Mideynta loo codsaday sida shuruud lama huraan ah waa in la heysto iimaan badan maxaa yeelay salaadda uma kici karno haddii aanan rumeysneyn in waxa aan weydiisano lagu heli karo si mucjiso ah.
Raadso jacayl jacaylka salaadda geerida Quduuska ah si aad u xukunto nin.
Dhimashada Quduuska ah ee loogu talagalay shaqada